Ngwa injinia ike na ihe eji arụ ọrụ ụlọ ọrụ | China Power engineering equipments na ihe ndị na-emepụta, ndị na-eweta ngwaahịa
obere ma ọ bụ ọkara voltaji n'elu ikuku na-eduzi aluminom ABC USB n'elu USB
Aerial Bundle Conductor (ABC cable) bụ echiche dị omimi maka ịkesa ike ọkụ ma e jiri ya tụnyere usoro nkesa na-enweghị isi. Ọ na - enye nchekwa na ntụkwasị obi dị elu karị, ọghọm ike na njedebe usoro akụ na ụba site na mbenata nrụnye, ndozi na ụgwọ ọrụ. Usoro a dị mma maka ikesa ime obodo na ọ zuru oke maka nrụnye na mpaghara siri ike dịka mpaghara ugwu, mpaghara ọhịa, mpaghara ala mmiri wdg.
Ogwe ike PVC (ike plastic) bụ otu n'ime ngwaahịa dị elu nke ụlọ ọrụ anyị. Ngwaahịa ọ bụghị naanị nwere ikike eletrik dị mma, kamakwa nwere ezigbo mgbatị kemịkal, usoro dị mfe, dị mfe iji, na ịtọ eriri anaghị ejedebe site na ọdịda. Ọ na ọtụtụ-eji na transformer circuit nke gosiri voltaji bụ 6000V ma ọ bụ n'okpuru.
galvanized perforated eriri tree
Nwere ezigbo mgbochi mmebi, ogologo ndụ ndụ, ndụ ogologo oge karịa akwa mmiri, mmepụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu, ogo na nkwụsi ike. A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na mpaghara ndị dị n'èzí bụ ndị na-emebi oke ikuku ikuku ma anaghị edozi ya ngwa ngwa.
na-ekpo ọkụ tinye galvanized igwe anaghị agba nchara aluminum waya ntupu cable tree
Ihe nkedo nkata nkata nkata bu uzo eji eme ihe site na igwe eletriki igwe di elu. Waya nkata na-emepụta site na mbụ ịgbado ọkụ na ụgbụ, na-akpụ ọwa, wee mechaa mgbe ịmechara ya. Ntinye 2 ″ x 4 mits na-ekwe ka ikuku na-aga n'ihu na-enyere aka igbochi ikpo ọkụ. Tụkwasị na nke a, usoro a na-emeghe pụrụ iche na-egbochi ikpo uzuzu, mmetọ na mmụba nje.
tupu galvanized ubube ụdị USB tree
Ubube ụdị eriri igwe nwere uru nke ịdị arọ, ụgwọ dị ala, ọdịdị pụrụ iche, nrụnye dị mma, ikpo ọkụ ọkụ na ikuku permeability. ọgwụgwọ na-ekewa electrostatic ịgba, kpaliri na paint.Also n'elu nwere ike si mesoo pụrụ iche mgbochi corrosion na arọ corrosion gburugburu ebe obibi.
1. Generator set ojiji Elu-edu nchara bụ ọkpụrụkpụ kanopi - 2MM ka 6MM.
2. Ejiri ya na nnukwu njupụta nke na - eme ka ụda - ụda mkpuchi, mkpuchi ọkụ.
3. Generator onwem na 12V / 24V DC batrị na chaja, batrị ejikọ waya.
4. Generator kwadebere ya na 10-12 awa mmanụ ụgbọala tank na mmanụ ụgbọala egosi, ogologo oge na-arụ ọrụ.
Ike nkesa kabinet usoro adabara AC 50 Hz, gosiri voltaji ruo 0.4 KV ike nnyefe na nkesa usoro. Usoro ngwaahịa a bụ ngwakọta nke ịkwụ ụgwọ akpaka na nkesa ike. Ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe n'ime ụlọ na n'èzí na-ekesa kabinet nke nchebe ọkụ eletrik, ike metering, ihe dị ugbu a, nrụgide na-emeghe nchebe. Ọ nwere uru nke obere olu, ntinye dị mfe, ụgwọ dị ala, mgbochi ọkụ eletrik ezuru, ime mgbanwe siri ike, iguzogide ịka nká, rotor ziri ezi, enweghị mmejọ ụgwọ, wdg.Ya mere ọ bụ ezigbo ma họrọ ngwaahịa maka mgbanwe ntanetị.